Askari Faransiis ah Oo lagu dilay dalka Maali. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Sep 25, 2021 116 0
War saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in mid kamid ah ciidamada Faransiiska ee duulaanka ku jooga Maali lagu dilay dagaal dhexmaray jamaaco hubeysan iyo ciidamada Faransiiska.
Sida ay baahisay madaxtooyada Faransiiska, askariga la dilay ayaa kamid ahaa ciidamo Faransiis ah oo ku baxay rag hubeysan oo la sheegay iney ku sugnaayeen deegaanno katirsan xuduud beenaadka Maali iyo Burkina Faso, kadib markii ay duubtay diyaarad drone ah.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanual Macron wuxuu sheegay inuu aad uga xumaaday dilka loo geystay askarigan katirsan ciidamada Faransiiska ee duulaanka ku tagay dalka Maali, isagoona sheegay inuu ku baxay dagaal ka dhan ah waxa uu ugu yeeray argagaxisada.
Wasaaradda dagaalka ee dowladda Faransiiska waxay dhankeeda tilmaamtay in askariga lagu diley toog ama shiish, kadib markii ragga hubeysan ay kamiin u dhigeen ciidamada Faransiiska.
Waa askarigii 52aad ee ciidamada Faransiiska looga dilo dalka Maali tan iyo markii ay duulaanka ku qaadey dalkaas sanadkii 2013-ka, sida ay qiraneyso wasaaradda dagaalka ee Faransiiska, balse waxaa la rumeysanyahay in tirada dhimashada intaasi ka badantahay.